#पेट्रोलियम पदार्थ | Suvadin !
अमेरिकामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ऋणात्मक, किन्नेले पाउँछ पैसा
काठमाडौं । लकडाउनले सवारी साधन र उद्योग धन्दा ठप्प हुँदा इन्धन खपतमा आएको गिरावटले अमेरिकामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पहिलो पटक ऋणात्मक भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत नभएपछि उत्पादकहरुले भण्डारण क्षमता कायमै राख्नका लागि क्रेतालाई उल्टै भुक्तानी दिन थालेको बीबीसीले जनाएको छ । भण्डारण क्षमता...
भारतमा बढ्यो पेट्रोलको मूल्य, नेपालमा के होला ?
काठमाडौं । भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । नेपाल आयल निमगले इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)बाट पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य सूची बढेर आएको जनाएको छ । आइसीले बिहीबार पठाएको मूल्य सूची अनुसार भारतमा पेट्रोल र डिजेको मूल्य केही बृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल...
Suvadin Media 479 0
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य वृद्धि गरेको छ । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठाएको मूल्य सूचीमा भाउ बढेर आएकाले मूल्य बढाउनु परेको निगमले जनाएको छ । नयाँ मूल्यसूच...
निगमले भन्‍यो - तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दैन
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राखेको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भए पनि सर्वसाधारणको हितलाई मध्यनजर राख्दै मूल्य यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ । गत कात्तिक ३० गते इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)ले निगमलाई प...
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । मंगलबार दिउँसो १२ बजेपछि लागु हुने गरी मट्टीतेल डिजल र पेट्रोलमा प्रति लिटर दुई–दुई रुपैयाँ घटाइएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए । अब पेट्रोलको प्रतिलिटर १०७ र डिजल–मट्टीतेलको प्रतिलिट...
DilipKarki 248 0
दर्ता नभएका ट्यांकरलाई इन्धन बोक्न नदिने निगमको चेतावनी, पेट्रोलियम अभाव हुने
काठमाडौं । सरकारले २०७६-७७ को बजेटमार्फत ढुवानी गर्ने साधनमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेट आएको दिनदेखि ३० दिनभित्र कम्पनी र भ्याटमा दर्ता हुन ढुवानी व्यवसायीलाई सूचना जारी गरेको थियो । ३० दिन पुग्‍न दुई दिन बाँकी रहँदा पनि अझै १८ सय बढी ट्यांकर भ्याटमा दर्ता भएका छैनन् । २...
ट्यांकर भारतीय नाकामा रोकिएपछि पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार
झापा । भारतले पूर्वी नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ बोकेर नेपाल भित्रिन लागेका ७३ ट्याङ्करलाई पश्चिम बङ्गालको पानीट्याङ्की भन्सारमा रोकेपछि पूर्वमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको छ । अनलाइन माध्यमबाट भन्सार ‘इन्ट्री सिस्टम’ शुरु गरिएको जनाउँदै भारतीय भन्सारले चार दिनदेखि तेलवाहक नेपाली...